Bitcentral's Media Workflows na-enyere ndị okike aka na-agwa akụkọ ndị ọzọ na-etinye aka na ntanetị | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Bitcentral's Media Workflows na-enyere ndị okike aka na-akọ akụkọ ndị ọzọ na-etinye
N'ụwa nke mgbasa ozi dijitalụ, mkpa nke ọdịnaya dị na-eto, na njikwa ya na-achọkwu ihe. Nke ahụ ga-adị okpukpu abụọ maka ndị okike ọdịnaya bụ ndị na-agba mbọ ọ bụghị naanị ịkọ akụkọ kachasị na-emetụta kamakwa n'ịchọta ndị na-ege ntị kwekọrọ na isi ozi nke ụdị ha. Ọdịdị bu onye okacha amara na ihe banyere oru mgbasa ozi na oru oma nke n’eme ka ihe vidiyo n’emezu uru ya. N’ezie, ọtụtụ n’ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ egosila na ha kacha arụ ọrụ nke ọma mgbe ha na-enyere ndị na-emepụta ọdịnaya aka na ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji mepụta ọdịnaya dị egwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị n’ihu na-eme ka ọdịnaya vidiyo dị.
Kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ, Ọdịdị ewepụtala usoro mgbasa ozi na-arụ ọrụ nke ọma na usoro ahaziri iche maka ndị mgbasa ozi chọrọ ime ka uru ọdịnaya vidiyo ha bara uru. Ngwọta ụlọ ọrụ Core News nke ngwanrọ a bụ usoro ngbasa ozi akụkọ nke 1 na US, na-eru ọtụtụ nde kwa ụbọchị. Ngwọta ọzọ, Njikwa Central na-enye usoro eji arụ ọrụ mgbanwe maka nna ukwu na - ejikwa usoro iji rụọ usoro niile na - abanye n'ime plaodu. FUEL, bụ Nke Bitcentral Kacha ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe Linear na Achọrọ.
Ihe karịrị 1,000 mmemme mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na-adabere Nke Bitcentral mmepụta akụkọ na ngwanrọ na-ejikwa sistemụ nchịkwa. Ma site n'enyemaka nke FUEL, ha nwere ikike ichebe ma nyefee ihe ndị ahaziri iche gafee nyiwe dijitalụ dịka OTT, web, ngwa, ngwaọrụ mkpanaka, yana igwe mgbasa ozi na syndication.
Ọtụtụ n'ime ỌdịdịIhe ngwọta nke atụmatụ a gụnyere:
Nchịkwa Master & Akụrụngwa
Site n’afọ 2000 na-eso ya, Ọdịdị egosila na ọ bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ na-eduga na ikike nke ngwaahịa ndị na - emepe emepe na - enyere ndị ọkachamara mgbasa ozi aka ịhazi ọfụma nke ọma ọdịnaya ha. Ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a gụnyere:
Nke Bitcentral prism Arụ ọrụ NRCS na-agbanwe agbanwe nwere ikike ijikọ ndị odeakụkọ, ndị na-emepụta ihe, na ndị nduzi na akụkọ a chọrọ ịkọ. Egwuregwu a na-eme ka imekọ ihe ọnụ n'ime ụlọ akwụkwọ akụkọ n'oge usoro mmepụta niile. Njikọ a na-agụnye mbipụta nke ọdịnaya karịa ihe ọdịnala ọdịnala ọdịnala na-enweghị banyere weebụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbanwe ụkpụrụ dị n'azụ prism na - enyere ndị ahịa aka ime ụlọ na akuko ozi ma gafee njikọ WAN iji nye aka na akụkọ ka ha na - eto. prism a na-egosi na usoro ikpo okwu, a ga-agbakwunye atụmatụ ya ngwa ngwa iji lebara nchegbu ọ bụla na-eto eto.
Mụtakwuo maka Prism site na ịga ebe anakpo.com / ngwaahịa / prism /.
Nke Bitcentral Usoro nchịkwa nchịkwa Oasis Arụ ọrụ dịka usoro nnyefe faịlụ echekwara nke na-enye ndị ọrụ aka inye aka site na laptọọpụ, mbadamba, na ngwaọrụ mkpanaka iji kọọ akụkọ kachasị emetụ n'ahụ ma na-akpali akpali. Isi uru nke Oasis na-abịa site n’ọchịchọ maka mmemme dị elu pụrụ iche, nke na-adịbeghị oke ọkụ, ọ rụpụtara na ịmepụta ma kesaa akụkọ ndị ọzọ na-emetụ n'ike n'ike ọsọ karịa ka ọ dị ugbu a. Na Usoro nchịkwa nchịkwa Oasis bụ nke a na-echekwa na ọdụ niile echere maka ya, ọ dịkwa ndị ọrụ ubi maka ị bulite ma ọ bụ nbudata ọdịnaya iji nyere aka na mmepụta akụkọ ha dịpụrụ adịpụ.
Mụtakwuo banyere Oasis site na ịga ebe anakpo.com / ngwaahịa / oasis /? utm_source = nabweb.
Nke Bitcentral multipath emere ya dika modulu Oasis MAM. MultiPath's sistemu dijitalụ nkesa vidiyo na ỌdịdịNgwakọta ọrụ ntanetị zuru oke, nke na-enye ohere maka usoro mgbasa ozi iji too karịa usoro ọdịnala. Nke Bitcentral multipath na-enye ohere ka a chikọta ihe niile n’otu modul na-enye echiche zuru oke banyere usoro mbipụta akwụkwọ mgbasa ozi zuru ezu. Mgbe emechara ihe omume mbipụta, usoro nhazi ma nwekwaa nghọta na-eduzi onye ọrụ ịhọrọ na ijikwa ọtụtụ mmepụta mbipụta, na-elekwasị anya na OVP's, CMS, na akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta.
Mụtakwuo oge Nke Bitcentral MultiPath site na ịga ebe anakpo.com / ngwaahịa / ọtụtụ mmụba /.
Njikwa Central bu ihe njikwa oru zuru oke ma ghazie onwe ya nke oma. Ọ na - enye usoro eji arụ ọrụ nke na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ niile na - abanye n'ime oghere nke na - eme ka ọrụ ndị ọrụ ghara ịdị na - emebi mmezi nke ojiji. Akụrụngwa a na-enye ndị ọrụ ọwa ozi zuru oke, yana nke ahụ gụnyere ntinye ụzọ, njikwa mgbasa ozi ma ọ bụ njikwa nchekwa, usoro ntanetị na ntanetị, ntanetị mmemme, nhazi usoro / ịkọ akụkọ, nlele sistemụ na ịkọ akụkọ, nhazi ọdịnaya nwere, na ndekọ ndepụta akpaaka. Ọ bụ ntanetị bụ sistemụ arụmọrụ kachasị arụ ọrụ maka ndị mgbasa ozi iji.
Mụtakwuo banyere Central Control site na ịga ebe anakpo.com / ngwaahịa / Central-njikwa /? utm_source = nabweb.
Abia n’abia FUEL, ntanetị dijitalụ a na usoro monetization nwere ogologo oge nnọkọ n'ọma ahịa. Ọ na-ewepụta ugboro iri ọkwa mgbasa ozi maka ndị na-ege ntị, ndị na-eweta ọdịnaya, na ndị mgbasa ozi. Onweghikwa usoro nkwanye ugwu ọzọ na-anapụta azụma azụ, na -eme ahụmihe nke ya FUEL, nke na-enye ike ike ọwa na ikpo okwu nke igwe ojii nwere njirimara nke gụnyere isonyere na-aga n’ihu, imeghe oyi, ikike itinye ọdịnaya dị ndụ, na enweghị ngagharị ọ bụla na-ewepụ ndị na-ekiri ya. Ndị mgbasa ozi anaghị emetụta ụdị Mgbasa ozi a, a na-etinyekwa ha nke ọma n'ọdịdị nchekwa nke ọdịnaya nke ndị na-ekiri na-enwe mmasị ikiri n'agbanyeghị oge na ebe, yana n'ofe niile.
Muta ihe banyere FUEL site na ileta ebe anakpo.com / ngwaahịa / mmanụ /.
Ihe Mere O Ji Kwesịrị Ibe Mgbasa Ozi Ọdịdị
Ọ bụla ọkachamara na agbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịmepụta iyi nke ihe ịtụnanya vidiyo na-ese ma na-ahụ ụzọ. Nzọụkwụ ọzọ bụ ijikwa usoro ọrụ ndị ọrụ dịka ọdịnaya chọrọ, yana ụlọ ọrụ ngwanrọ na-eduga dị ka Ọdịdị nwere ike inye aka na nke ahụ. Ma ọ bụ ngwaahịa ha ma ọ bụ ihe ngwọta ha, ọdịnaya vidiyo ahụ onye ọkachamara mgbasa ozi mepụtara nwere ihe niile ị ga-enweta ma a bịa na amamịghe nke Ọdịdị ọ bụkwa ntinye aka na ngalaba dijitalụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aga nke ọma ma na-agbasawanye.
Maka ozi ọzọ banyere Ọdịdị, nleta ebe anakpo.com /
Ọdịdị Onye na-ahụ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Njikwa Central ™ content mmepụta ọdịnaya Isi Core News ™ edozi edozi Digital Media usoro nyefe faịlụ FUEL Linear na Achọrọ nna ukwu na-ejikwa ya ọrụ mgbasa ozi multipath NRCS ikpo okwu Usoro nchịkwa nchịkwa Oasis prism ime akụkọ akụkọ mgbasa ozi na syndication 2020-05-08
Osote: “Lọ 'PSA ọhụrụ' nke ProBalance ma jiri akara igwe Blackmagic chepụta ya na DaVinci Resolve